အဖြူရောင် သံယျောဇဉ်…Remembrance… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဖြူရောင် သံယျောဇဉ်…Remembrance…
Posted by အရင္ကေက်ာ္စြာဦးႀကီးမိုက္ on Feb 15, 2014 in Creative Writing, My Dear Diary | 26 comments
နံပါတ်ကြည့်လိုက်တော့ အစိမ်းသက်သက်..ဒါနဲ့ပဲ ဖုန်းဖြေလိုက်ပါတယ်…
၂ရ နှစ်လောက်ကြာခဲ့ပေမဲ့ ကျုပ်ဒီ “အကို” ဆိုတဲ့အသံကို
မှတ်ကျက်မိနေတာကိုလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အံ့ဩသွားတယ်….
“မေ…မေ…မေ …….. ဟုတ်လားဟင်”
“ဟုတ်ပါတယ်အကို…မေ ရန်ကုန်လာဖြစ်တုန်း မင်္ဂလာဒုံမှာ ကိုမောင်စိန်နဲ့တွေ့တယ်
သူ့ဆီက အကို့ဖုန်းရလို့ လှမ်းဆက်ကြည့်တာပါ..”
`ကောင်းပါတယ်အကို…မေတို့တွေ အသက်တွေလည်း ကြီးနေကြပြီ…
ဘယ်နေ့သေမယ်မသိ….မသေခင် အကို့ကိုတော့ တစ်ခါလောက် တွေ့သွားချင်တယ်
`အော်..မေရယ်…ကိုယ်ကလည်းတွေ့ချင်နေတာပါ…ခု မေ ဘယ်မှာတည်းလဲဟင်´
`မေ ရွှေတိဂုံ အရှေ့ဖက်မုခ် နားမှာနေတဲ့ အမလေးအိမ်မှာတည်းတယ် အကို´
`ဘယ်နေ့ ပြန်မှာလည်း ဟင်..´
`အကိုအားရင်..တနင်္ဂနွေမနက်စောစော တွေ့ချင်တယ်….အကိုနဲ့တွေ့ပြီး မေ လည်းပြန်မှာပေါ့´
`ဒါဆိုဒီလိုဖြစ်မလား..ကိုယ် ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဘက်မုခ်က တနင်္ဂနွေနေ့
မနက် ရ နာရီ လာစောင့်မယ်လေ…မေ လာနိုင်မလား..´
ဖုန်းချလိုက်ပြီးတော့…ကျုပ်ရင်တွေ ထူးထူးဆန်းဆန်း ခုန်နေတာသတိထားမိတယ်
အဲဒါနဲ့ လုပ်လက်စ အလုပ်လေးဖြတ်..အပေါ်ထပ်ကရုံးခန်းကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်…
ရုံးအကူ အဒေါ်ကြီး ကို ကော်ဖီတစ်ခွက်ဖျော်ခိုင်းလိုက်ပြီး…အတွေးတွေက…
လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့ နှစ်သုံးဆယ် ကျော်လောက်ဆီ အလိုလိုလွင့်မြောရောက်ရှိ်သွားပါတော့တယ်……
ကျုပ် ဆယ်တန်းအောင်မဲ့ နှစ် အဖေကလည်းရန်ကုန်ပြောင်းရပါတယ် ဆယ်တန်းအောင်စါရင်းတွေထွက်တော့ အောင်စါရင်းကိုု မြို့ထဲက အထက်တန်းပညာဦးစီးဋ္ဌာနမှာသွား ကြည့်ရပါတယ်…
အဲ့ မှာ တပြည်လုံးအတွက် အောင်စာရင်းတွေကပ်တယ်လေ…
ဒါပေမဲ့…ကျုပ်က စာပေးစာယူတက်ပြီး အလုပ်လုပ်ချင်နေပြီ…
အဖေက မရဘူးဗျို့…`ငါ့သားသမီးတွေထဲ ပထမဆုံး ဆယ်တန်းအောင်တာ
မင်းတက္ကသိုလ် တက်ကိုတက်ရမယ်´လို့ တစ်ချက်လွှတ်အမိန့်ချတော့..
ကျုပ် အင်းယားလေးနားက အာစီ တူး မှာ လျှောက်လွှာသွားတင်တဲ့နေ့….မှတ်မှတ်ရရ
ကျုပ်တို့တပ်ထဲက ကျုပ်နဲ့အတူ ဆယ်တန်း အောင်တဲ့ စိုးကြီးဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းနဲ့
စိုးကြီးကမေးတော့ ကျုပ်က `ဘိုင်အိုလျှောက်ထားတယ်ကွ´ ဆိုတော့
`ဘာကြောင့်ဘိုင်အို လျှောက်တာလဲကွ..ငါက သချာင်္ လျှောက်ထားတာ´..တဲ့
`ဟ..ငါက ဆယ်တန်းမှာ ဘိုင်အိုရယ်..သချာင်္ရယ် ဂုဏ်ထူးနဲ့အောင်တာလေကွာ
..နောက်..ငါကဘိုင်အို ဝါသနာပါသကွ..ဘာယူယူ နောက်ဆုံးဘွဲ့တစ်ခုတော့ ရမှာပဲလေကွာ..´
`ဟာ..မင်းကလည်း..တပ်ထဲက ဒေသကောလိပ်တက်မှာ မင်းနဲ့ငါ နှစ်ယောက်ထဲ
ကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကလည်း…အစကတည်းက တက္ကသိုလ် ဆက်တက်ချင်တာမဟုတ်
`အေးပါကွာ..ငါ မင်းနဲ့တူအောင် သချာင်္မေဂျာပျောင်းလိုက်မယ်..ဟုတ်ပြီလား..´
ဒီလိုနဲ့ ဆယ်တန်းမှာ သချာင်္နဲ့ ဘိုင်အို ဂုဏ်ထူးထွက်ခဲ့တဲ့ ကြီးမိုက်တစ်ယောက်
ရန်ကုန်က နာမည်ကြီး ဒေသကောလိပ် (၂) မှာ သချာင်္မေဂျာနဲ့ တက်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာ…
ကျောင်းစတက်တဲ့နေ့…ကျုပ်တို့လည်း..ဟိုရှာဒီရှာနဲ့ ကျုပ်တို့တက်ရမဲ့ အခန်းကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်…
အတန်းခွဲက M4 တဲ့…မင်္ဂလာဒုံနဲ့ အင်းစိန်ကျောင်းသား အများစုပေါ့
နဲ့စီတာဆိုတော့…ကျုပ်နဲ့ သောင်းစိုးက ရိုးနံပါတ်အစဉ်လိုက်ပဲပေါ့…
.မှတ်မိသေးတယ်ဗျာ…အာစီတူး ဆိုတဲ့ ကျောင်းကြီးဟာ အရောင်အသွေးစုံလင်စွာနဲ့
ပန်းပေါင်းစုံနဲ့လှပတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးလိုပါပဲ…ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အဖေ့အကျ စစ်အင်းကျီကိုယ်စီနဲ့ စစ်လွယ်အိပ်ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့………………
ဂျမ်းဂဲဟက်ခေါ်တဲ့ စစ်ဦးထုတ်ကို ငိုက်ငိုက်ဆောင်းထားသေးတယ်…
လောကကြီးကို အဲ့တုံးက သိမ်ငယ်နေခဲ့မိတယ်လေ…ဆင်းရဲတာကိုး……
မနက် မနက်ဆိုရင် တပ်က ရဲဘော်တွေကို ဖယ်ရီကြိုတဲ့ကားနဲ့ မနက်ငါးနာရီခွဲ
၆ နာရီဆိုရင်ရောက်နေပြီ…ကျောင်းက ရနာရီမှတက်မှာ ကျောင်းစောင့်တွေတောင်မနိုးကြသေးဘူး….
တီးမဲ့ အချိန်စောင့်တာပေါ့….လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ဖက်တော့..မျက်စောင်းတောင် ထိုးမကြည့်
နိုင်ပါဘူး…ကျောင်းဆင်းရင် ဘတ်စ်ကား စီးပြန်ဖို့ တစ်ယောက်မှာ ငါးမူး စီပဲရှိတာကိုး
(အဲဒီတုန်းက ဝါယာလက်ကနေ အာစီတူး ကို စီးသွားစရာ နံပါတ် ၉ ကားပဲရှိတာ..ကားခကပြားလေးဆယ်ပဲ)
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက် ကြော်ငြာသင်ပုန်း တွေမှာကြည့်ပြီး ကိုယ်တက်ရမဲ့အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့ကြပါတယ်…တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်လဲ မသိကြသေးတဲ့ လူစိမ်းတွေဆိုတော့
သူ့ ကိုယ်အကဲခတ်..ကိုယ့် သူအကဲခတ်နဲ့ပေါ့…..
အတန်းက သင်ခန်းစာ စပါပြီ….
ဒီနေရာမှာ တစ်ခုပြောချင်တာက..အာစီတူးက စာသင်ခန်းတွေက အမေရိကန်
နောက်ဆုံးတန်းကနေ ရှေ့ဆုံးတန်းထိ တစ်ဆင့်စီနိမ့်သွားပြီး..အနိမ့်ဆုံး
အလယ်မှာတော့ ကျောက်သင်ပုန်းနဲ့ ဆရာ၊ ဆရာမစားပွဲ…အဲလို..အဲ့လို..
ထုံးစံအတိုင်း ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်က အလယ်လောက်မှာ နေရာယူလိုက်ကြတယ်…
ဆရာမကသာ စာသင်နေတာ ..ကျောင်းသားတွေကတော့ ကျွက်စီကျွက်စီနဲ့…
ကျုပ်လည်း ဆရာမ သင်နေတာနားထောင်ရင်း…အခန်းထဲကို ကျီးကန်းတောင်းမှောက်
လိုက်ကြည့်နေရာက …ကျုပ်မျက်လုံးတွေ တစ်နေရာမှာ ဆက်ရွှေ့လို့မရအောင်ရပ်သွားပါလေရော………..
သူ့မျက်နှာတစ်ခြမ်း စောင်းလေးကို မြင်လိုက်ရတာ…အသားကဖြူဖြူ၊ ဆံပင်က
မျက်စေ့ လွှဲဖို့မေ့ပြီး စိုက်ကြည့်နေမိတယ်…သူကတော့ ဖြတ်ကနဲ ပြန်လှည့်သွားလေရဲ့..
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျောင်းတက်တဲ့ရက်တွေတိုင်း သူ့ကိုမြင်ရမဲ့နေရာ ရွေးထိုင်ပြီး
ကျောင်းထဲသွားလာရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင် ဆုံမိတဲ့အခါတွေလည်းရှိတာပေါ့…
အဲလိုခါမျိုးမှာ သူက တစ်ချက် စိုက်ကြည့်ပီး မျက်လွှာချသွားတတ်တယ်…
သူ့နာမယ်လည်းမသိ၊ ဘယ်နေမှန်းလည်းမသိ…ဒါပေမဲ့ သူ့ကိုကျုပ်အမြဲလိုက်လိုက်ကြည့်နေတော့…သူကလည်းကျုပ်ကိုတော့သတိထားမိနေပြီပေါ့…
အချမ်းသာကြီးမဟုတ်တောင် ကျုပ်ထက်တော့ အများကြီး ပြေလည်ပုံရတယ်…
ဒီလိုနဲ့ ကျုပ်လည်းကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းလေးငါးခြောက်ယောက်လောက်
ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းမိလာတယ်…ကျုပ်မှာရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမား မှန်းထားတာ
မရှိပေမဲ့ ကျုပ်ဘော်ဒါတွေကတော့ အရမ်းကိုစာကြိုးစားကြတာကိုး…
ဒီနေ့သင်တဲ့စာ..နောက်နေ့ဆို အချင်းချင်း ပြန်ရွတ်ပြ ဆွေးနွေးကြနဲ့…
ကျုပ်လည်းတစ်ယောက်ထဲ သီးခြားနေတာမဟုတ်တော့ သူတို့ကို
အောက်ကျမခံချင်တာနဲ့ တစ်နေ့စာတစ်နေ့ လုပ်ဖြစ်လာတယ်…
နေကြတာကလည်း မင်္ဂလာဒုံကချည်းဆိုတော့ ပိတ်ရက်တွေမှာ
တစ်အိမ်တစ်လှည့် စုကြပြီး ကျောင်းကသင်တဲ့တစ်ပါတ်စာ ပြန်ပြန်လုပ်ဖြစ်ကြတယ်…
ကျုပ်တို့တစ်ဖွဲ့လုံးလည်း အိမ်အခြေအနေတွေက သူမသာ ကိုယ်မသာ
ဆိုတော့…ထုံးစံအတိုင်း ကျောင်းဈေးတန်းဆိုတာ ကျုပ်တို့ဖို့ ဖွင့်ထားတာ
မဟုတ်သလိုပါပဲ…အားချိန်တွေဆို အရိပ်ကောင်းကောင်းမှာ စုထိုင်ကြပြီး
သဘာဝ ဆေးပေါ့လိပ်လေးဖွာရင်း စာအကြောင်းချည်းဆွေးနွေးကြတာပဲ…
တစ်ခါတလေလည်း တောအကြောင်း တောင်အကြောင်းပြောပေါ့…
တစ်ခုတော့ရှိတယ်…တစ်နေ့တစ်နေ့ ကားခပိုတဲ့ ၁ဝပြားစီစုထားကြ..
တစ်ပါတ်တစ်ခါလောက်တော့ ကျောင်းက သက်သာကန်တီးမှာ
လဘက်ရည်သောက်ဖြစ်ကြတယ်…အဲ့မှာက လဘက်ရည်တစ်ခွက် သုံးမတ်ပါ။
ကျုပ်တို့အားလုံးက ချစ်စနိုးနဲ့ “ဖိုးဂျီ” လို့ခေါ်တဲ့ ကောင်ကစိုက်လေ့ရှိတယ်..
ကျုပ်တို့ထဲ နဲနဲပြေလည်တာ သူတစ်ယောက်ပဲရှိတာ…
ဘယ်အဆင့်မှ မတက်ဖြစ်ပါဘူး…ကျုပ်ဟာကျုပ် သိမ်ငယ်ပြီး မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တာရယ်..
ကျောင်းပြီးလို့ အလုပ်ရရင် မိဘတွေနဲ့ ကျန်အငယ်တွေကို ကျုပ်ကလုပ်ကျွေးရအုံးမှာ
ဆိုတဲ့ တာဝန်ကလည်းခေါင်းထဲရှိနေတော့…အချစ်ရေးမှာ ရှေ့ဆက်ဖို့ မကြိုးစားခဲ့တာပါ…
သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အခြေနေကို အားလုံး သိတော့ အတင်းမတွန်းကြပါဘူး…
အဲဒီလိုနဲ့ ပထမနှစ်စာမေးပွဲတွေ ပြီးတော့ …ကျောင်းတွေပိတ်……….ပိတ်ရက်အတွင်း
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တော့ မကြာခဏဆုံကြပေမဲ့…သူ့ကိုတော့ မတွေ့ရတော့ဘူးပေါ့…
အောင်စာရင်းတွေထွက်တော့ မှန်းထားတဲ့အတိုင်း…အမှတ်တွေ တော်တော်ကောင်းပါတယ်
ဂုဏ်ထူးတော့ ၂ဘာသာပါတယ်…သူငယ်ချင်းတွေလည်း အမှတ်ကောင်းကြပါတယ်…
အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေကို ဒီနေ့အထိ ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်…သူတို့နဲ့သာမတွဲမိရင်
ဒုတိယနှစ်ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့…အပျော်ဆုံးနဲ့ စိတ်အတက်ကြွဆုံးသူက
ဒုတိယနှစ်မှာတော့ အတန်းသားတွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးသူတွေပိုများလာပါတယ်..
တွဲနေကျ ကိုယ့် အုပ်စုလေးနဲ့ကိုယ်နေကြပေမဲ့…အုပ်စုလေးတွေ တစ်စုနဲ့တစ်စုလည်း
မျက်မှန်တန်း ခင်မင်လာကြပြီး အခေါ်အပြော အဆက်အဆံ ရှိလာကြပါတယ်…
အဲဒီတော့မှ..မင်္ဂလာဒုံကပဲတက်တဲ့ နောက်အုပ်စုတစ်ခုက “သူ”နဲ့အတူ Lab တစ်ဖွဲ့
တည်းကျတော့…“သူ့” နာမည်နဲ့ သူ့အကြောင်းကျုပ်စသိလာရပါတယ်….
သူက ပန်းတနော်ကဖြစ်ပြီး အစိုးရအရာရှိကြီးတစ်ဦးရဲ့သမီးပါ..ရန်ကုန်မှာ
ကျောင်းတက်ချင်လို့ အင်းယားလမ်းက အဆောင်ထားတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ
သူ့အမနဲ့အတူ နေပြီး ကျောင်းတက်နေတာလို့သိရတယ်…..
အဲဒီပြန်ပြောပြတဲ့အုပ်စုက ကျုပ်တို့အဖွဲ့လို ယောက်ကျားလေးချည်းမဟုတ်ပဲ မိန်းကလေးတဝက်ယောက်ကျားလေးတစ်ဝက်ပါ..တော်တော်လည်းခင်ဖို့ကောင်းကြပါတယ်.. သူတို့ကလည်း ကျုပ်ရဲ့ အုံ့ပုန်းဇတ်လမ်းကိုသိတော့ အားပေးကြပါတယ်….။
ကျုပ်တို့သူငယ်ချင်းတစ်စုလည်း ထုံးစံအတိုင်း စာကြိုးစားရင်း ကြံဖန်ပျော်နေခဲ့
ကြတာပါပဲ။ တစ်ခုထူးခြားလာတာကတော့ ကျုပ်ရဲ့ သူ လေးပါပဲ…
ကျုပ်နဲ့မျက်လုံးချင်းဆုံရင် အရင်လို ချက်ချင်းမျက်လွှာချမသွားပဲ…
ပြုံးရောင်ရောင်လေး တွေ့လာရတာပါပဲ…ကျုပ်မလဲ ရောဂါကရင့်သထက်ရင့်လာတာပေါ့
ဒါပေမဲ့ စာထဲမှာစိတ်နှစ်ပြီး ကျုပ်တတ်နိုင်သလောက်ထိန်းခဲ့ပါတယ်….
အဆုံးအဖြတ်ပါပဲ…၁ဝတန်း အမှတ်၊ ပထမနှစ်အမှတ်၊ ဒုတိယနှစ်အမှတ်တွေပေါင်းပြီးမှ
တက္ကသိုလ် ခွဲမှာမဟုတ်လား…ဒီတော့ကျုပ်တို့ သူငယ်ချင်းတတွေ
အစွမ်းကုန် ကျောင်းစာနဲ့ နပန်းလုံးကြတာပေါ့…
အဲ..စာမေးပွဲမဖြေခင် တစ်ပါတ်လောက်အလိုမှာ ကျုပ်စာတစ်စောင်ရပါတယ်…
သူ ပေးတဲ့စာကို တို့ရပါတယ်
စာမေးပွဲဖြေပြီး နောက်ဆုံးနေ့ သူ နဲ့တွေ့ချင်ပါတယ်…
ဒါနဲ့..ဟို မင်္ဂလာဒုံက ခင်နေကြတဲ့နောက်တစ်ဖွဲ့ကို အကျိုးအကြောင်း ပြောပြတော့…
တဖွဲ့လုံး ပြုံးစိစိလုပ်နေကြပြီး တစ်ယောက်မှဝန်မခံဘူး…ပြောသေးတယ်
“နင် ချစ်တဲ့သူလေးက အခုနင့်ကိုတွေ့ချင်တယ်လို့ချိန်းနေပြီပဲ…ဘာလဲ
သေချာတယ်..အဲဒီအဖွဲ့ထဲက မိန်ကလေးတစ်ယောက် လှော်လိုက်တာပဲဖြစ်မယ်…လို့
ဆုံးမပြီး …ဒုတိယနှစ် စာမေးပွဲကို အောင်မြင်စွာ ဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်…
နောက်ဆုံးနေ့ဖြေပြီး အခန်းအပြင်ထွက်တော့ သူငယ်ချင်းတွေ ကော်ရစ်ဒါမှာစုပြီး
ကျုပ်လှမ်းကြည့်တော့…ဟုတ်ပါတယ် ဟိုမင်္ဂလာဒုံအုပ်စုထဲက မိန်ကလေးတစ်ချို့နဲ့ “သူ”
ကျုပ်လည်း ကျုပ်ဘော်ဒါတွေကို နှုတ်ဆက်ပြီးသူ့နောက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်…
သူနဲ့ကျုပ်က ခြေလှမ်းငါးဆယ်လောက်ပဲကွာတာပါ..ဒါနဲ့ ကျောင်းဝန်းအပြင်ရောက်တဲ့အထိ
ခပ်ခွာခွာကပဲလိုက်သွားပါတယ်…သူက ကားဂိတ်ကိုကျော်ပြီး ပြည်လမ်းမဖက်ကိုဦးတည်သွားနေရင်း…တချက်တချက်ကျုပ်ကိုလည်းလှည့်ကြည့်ပါတယ်
လူရှင်းတဲ့ လမ်းမဖက်ရောက်တော့ ကျုပ်ခပ်သွက်သွက် ခြေလှမ်းလိုက်ပြီး
သူ့အသံလေးက တိုးပေမဲ့ ကြည်လင်နေတယ်
နှစ်ယောက်စလုံး စာမေးပွဲအကြောင်းတွေချည်း ပြောရင်းနဲ့ လျှောက်လာလိုက်တာ
အခု IBC လို့ခေါ်တဲ့ ကန်ထောင့် နားရောက်လာလို့ အင်းယားကန်ဘောင်ပေါ်တက်ပြီး
စကားပြောရင်းတဖြည်းဖြည်း ရင်းနှီး နွေးထွေးလာသလိုဖြစ်ပြီး
ပြောရတာ အဆီအငေါ်တဲ့လာပါတယ်….နောက်တော့ အင်းယားထောင့်က
ဘူးသီးကြော်ဆိုင်လေးမှာ နှစ်ယောက်သား ထိုင်ဖြစ်ပါတယ်…
ဒီလိုနဲ့….ဒီလိုနဲ့….ဒီလိုနဲ့…တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် သိပ်ချစ်ကြတဲ့
တတိယနှစ် တက္ကသိုလ်တွေခွဲတော့ ကျုပ်တို့အဖွဲ့ ၆ယောက်ထဲက
၅ယောက်က RIT ဝင်ပြီး စိုးကြီးတစ်ယောက်ပဲ မိန်းထဲရောက်သွားပါတယ်
“မေ”ကတော့ ဓါတုမေဂျာနဲ့ စိုးကြီးနဲ့အတူ မိန်းထဲမှာပေါ့…….
ဒါကြောင့်ပဲ…စာသင်နှစ် တစ်နှစ်လုံး ကျုပ် RIT နဲ့ RASU ချောင်းပေါက်အောင်
နောက်နှစ်နှစ်ကြာတော့ မေလည်းကျောင်းပီးသွားလို့ ပန်းတနော်ပြန်သွား…
ကျုပ်မှာသာ…လွမ်းတသသနဲ့ ရန်ကုန်မှာကျောင်းတက်ရင်း ကျန်ခဲ့တာပေါ့…
နောက် ၆လလောက်ကြာတော့…မေတစ်ယောက် တွံတေးမှာ ကျောင်းဆရာမ အလုပ်ရပြီး
တွံတေးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ သူ့အမ ဆရာဝန်မကြီးနဲ့ အတူနေကြောင်း
ကျုပ်လည်း သတင်းကြားကြားချင်း ကျောင်းတစ်ရက်ဖျက်ပြီး တွံတေးကိုချီတက်သွားခဲ့ပါတယ်…မေ စာသင်နေတဲ့ကျောင်းကိုလိုက်သွားတော့
မေ တအံ့တဩနဲ့ ထွက်တွေ့ပါတယ်…မေ က ဆရာမဝတ်စုံလေးနဲ့ လိုက်ဖက်လိုက်တာ
ပြီးတော့ မေ ရဲ့ စီစဉ်မှုနဲ့
မေ့ အမအိမ်မှာ အိမ်ဖေါ်လုပ်တဲ့ အဒေါ်ကြီးအိမ်မှာ တစ်ညတည်းဖြစ်ပါတယ်..
အဲတော့..နောက်နေ့မနက် သူ့ဆေးရုံမှာ သူနဲ့လာတွေ့ပါတဲ့…
ဒါနဲ့ပဲ နောက်နေ့ သူ့အမ ဆရာဝန်မကြီးနဲ့ သွားတွေ့လိုက်ပါတယ်…
သူက ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်လုံး ငယ်သေးတဲ့အကြောင်း…ကျုပ်ကိုလည်း
ကျောင်းပြီးသည်အထိ စာကိုသာကြိုးစားသင်ယူပြီး ကျောင်ပီး၍ အလုပ်ရပါက
မေနဲ့တွေ့ချင်ရင် သူ့အိမ်မှာ ခဏတဖြုတ်လာတွေ့နိုင်ကြောင်း…
ကျုပ်လည်း မေရှိရာကျောင်းကိုလိုက်သွားပြီး မေ့ကိုနှုတ်ဆက်လို့
စာမေးပွဲလည်းနီးလာပြီဖြစ်လို့ ကျုပ်မှာ တစ်နှစ်လုံး အချစ်ရူးပြီး
မလုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းစာတွေ အသဲအသန် လုပ်နေရတာနဲ့
မေ့ဆီတောင် သွားမတွေ့နိုင်ပါဘူး…ကျုပ်အိမ်က မရှိမဲ့ ရှိမဲ့
ထားရတာဆိုတော့ ကျုပ်ကျလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ကိုယ့်ကိုကိုယ်လည်း
သိတာမို့ မေ့ကို ခဏအဆက်ဖြတ်ထားခဲ့ရပါတယ်
၃လလောက်ကြာ စာမေးပွဲကြီးပီးသွားပြီးတဲ့အထိ မေ့ဆီက စာလည်းမလာ
မေ့အမ အိမ်ရောက်သွားတော့ တခြားဆရာဝန်ကြီးတစ်ဦးကိုတွေ့လို့
သူပြောပြမှ မေ့အမကြီး ရန်ကုန်ပြန်ပြောင်းသွားမှန်းသိရပါတော့တယ်…
ဒီလိုနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ပြီး ….ကျုပ်လည်း အလုပ်ရရှိရေး
ကြိုးစားရင်းနဲ့ ကျောင်းပီးပြီး ၂ နှစ်လောက်ကြာမှ အစိုးရအလုပ်တစ်ခုရခဲ့ပါတယ်
နယ်မှာ အလုပ်လုပ်ရင်းလည်း မေ့ကို လွမ်းနေမိတယ်…စိတ်ထဲကလည်း..
ငါ အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေ့ မေ့ ကို မတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီး လက်ထပ်ယူမယ်လို့…
တစ်နေ့ မင်္ဂလာဒုံမှာရှိတဲ့ မိဘအိမ်ခဏပြန်ရင်း ကျောင်းနေဖက်သူငယ်ချင်း
အခုငါက အလုပ်နဲ့ နယ်ရောက်နေတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့ကွ”
“အေး…မင်းကိုပြောရအုံးမယ်…ငါ ပြီးခဲ့တဲ့လက တွံတေးရောက်သေးတယ်ကွ”
တွံတေး ဆိုတဲ့အသံကြားလိုက်တော့ အတိတ်ကို ပြန်လွမ်းမိသွားပါတယ်…
“ငါ့ညီမ မိကြည်သန်း ဆရာမအလုပ်ရလို့ လိုက်ပို့တာကွ..ငါဘယ်သူနဲ့တွေ့ခဲ့လည်းသိလား”
“မေ နဲ့တွေ့ခဲ့တယ်ကွ…မိကြည်သန်းနဲ့ တစ်ကျောင်းထဲပဲ…အထကကျောင်းမှာ”
မင်း အတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ..ငါလည်း ဖုံးမထားချင်လို့..”
ဒီအစီအစဉ်ကလည်း သူမိဘတွေ အမတွေရဲ့ အစီအမံနဲ့တူပါရဲ့ကွာ…
ငါလို ငမွဲကောင်နဲ့ ရမှာစိုးလို့နေမှာပေါ့….
ဘာပဲပြောပြော စိုးကြီးရာ..ငါသူ့ကို တစ်ခါလောက်တော့တွေ့ချင်သကွာ..
ဒါပေမဲ့…မင်းမတွေ့ သင့်တော့ဘူး…..တွေ့ရင် မင်းစိတ်ထိန်းနိုင်မယ်ငါမထင်ဘူး…
မေ တောင် ငါ့ကိုမင်းအကြောင်းတွေမေးရင်း..မျက်ရည်စမ်းစမ်း စမ်းစမ်း နဲ့…
ကျုပ်တို့နှစ်ယောက် ဘယ်လောက်ချစ်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတာ ကောင်းကောင်း
သိနေတဲ့ စိုးကြီးက တွေးတွေးဆဆပြောပါတယ်…..
အခြေအနေလေး သိသလောက်ပြောပြပါအုံး” လို့ကျုပ်ကမေးတော့…
ငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အိမ်ကြီးကလည်း တော်တော်ပြည့်ပြည့် စုံစုံနဲ့ပါ…
“အင်း…လင်ကောင်းသားကောင်းရသွားတာကို ပဲ ဝမ်းသာပါတယ်ကွာ
ဒါပေမဲ့ ..ဘယ်လိုမှမေ့လို့မရ…ဖြူဖြူစင်စင်နဲ့ပဲ သတိရနေရတော့မှာပေါ့ မေရယ်..
ဇန္နဝါရီလရဲ့ တနင်္ဂနွေနံနက်ခင်းလေးဟာ မြူနှင်းတွေ့ဝေလို့
ရွှေတိဂုံဘုရား အရှေ့ဖက် မုခ် ဘက်လျှောက်လာနေတဲ့ သူတွေကိုငေးကြည့်ရင်း..
သူ ဘယ်လိုပုံဖြစ်နေမှာပါလိမ့်…ငါမှတ်မိနိုင်ပါ့မလားလို့ ကျုပ်တွေးနေမိတယ်…
၂ရ နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ အများကြီးပြောင်းလဲသွားနိုင်တာကိုး….
နာရီကိုတစ်ချက်ငုံ့ကြည့်ပြီး ပြန်အမော့မှာ ခပ်လှမ်းလှမ်းကလျှောက်လာနေတဲ့
အကွာလောက်ရောက်တော့…ရပ်လိုက်ပြီး ကျုပ်ကိုကြည့်နေရာက ပြုံးပြပါတယ်..
တကယ်တန်းကျတော့ ငယ်ရုပ်ကိုနှစ်ဦးလုံး ဖမ်းပြီး မှတ်မိကြပါတယ်….
သူက အရင်ထက်နဲနဲပိန်ပြီး မျက်နှာကတော့ အရေးအကြောင်းလေးတွေ
ကျုပ်တို့ ရွှေတိဂုံဘုရားတက်ဖူးပြီး သူလျှောက်ချင်တဲ့ ကန်တော်ကြီးဖက်
သူက ဘာကြောင့် ကျုပ်နဲ့ အဆက်ပြတ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာ ပြန်မပြောသလို
ကျုပ်ကလည်း မသိချင်တော့လို့ မမေးဖြစ်ပါဘူး…
ကျုပ်က ယူလာတဲ့ သားနဲ့သမီးပုံထုတ်ပြတော့…သေချာကြည့်ပြီး
အကို မေနဲ့ မရခဲ့တာ ကံကောင်းတာပေါ့..တဲ့..အကို့မိသားစုလေးက
ပျော်စရာလေး…သူ့မှာတော့ ကလေးမရနိုင်လို့ အခုလိုအသက်ကြီးလာချိန်မှာ
စီပွားရေးနဲ့ပဲအချိန်ကုန်.. သူ့မှာလည်း ပန်းနာရောဂါကြောင့် ဆရာမအလုပ်ကလည်းထွက်လိုက်ရပြီဆိုတော့..ဘဝမှာ
ပြည်ပပါ ဘုရားဖူးထွက်လိုက်၊ အမတွေရှိရာ နိုင်ငံခြားသွားလည်နေလိုက်၊
ကျန်တဲ့အချိန်တွေကိုတော့ တရားဓမ္မနဲ့သာ မွေ့လျော်နေကြောင်း
…ကျုပ်နဲ့ တွေ့ချင်နေတာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကတည်းကပေမဲ့ လူက အသက်ငယ်သေး၊ မရင့်ကျက်သေးတော့ အမှားမဖြစ်ရအောင် အောင့်ဧည်းနေခဲ့ရကြောင်း…အခုတော့
စီကာပတ်ကုံး ပြောပြပါတယ်…ကျုပ်ကိုလည်း မိသားစုလေးနဲ့ အဆင်ပြေပြေတွေ့ရလို့
မနက် တွေ့ခါစတုန်းကနဲ့မတူ မျက်နှာကလေးကြည်ပြီးပေါ့ပါးလန်းဆန်းနေပါတယ်..
ဒီလိုနဲ့ သူပြောကိုယ်ပြောနဲ့ အချိန်ကိုကြည့်တော့ ၁၁နာရီထိုးတော့မယ်…
ဒါနဲ့ပဲ ကျုပ်အဆိုပြုတဲ့ အတိုင်း မြို့ထဲ ကိုသွား၊ သူ့ နဲ့အတူမနက်စာစားပြီး
သူပြန်ဖို့ ပန်းဆိုးတန်း ကူးတို့ဆိပ်ကိုလိုက်ပို့ခဲ့ပါတယ်…………
ဒလဘက် ကူးတဲ့ သဘောင်္ပေါ်ကနေ သူလက်ပြတော့ လက်ပြန်ပြရင်း..
ငယ်ငယ်တုန်းက မေ့ ကိုတွေ့ဖို့ တွံတေးကို သွားခဲ့တာ သတိရဖြစ်အောင်ရလိုက်ပါသေးတယ်…
အော်…အခုတော့လည်း ဖြူစင်တဲ့ သံယောဇဉ်လေးတွေနဲ့ပေါ့……
ကျုပ် အကိုဂျီး မိုက်ရဲ့ ရှေးဖြစ်ဟောင်းအောင့်မေ့ဖွယ် ဇာတ်လမ်းလေးပါလားးး
ကျောင်းပြီးတော့ တပ်ထဲဝင်..။ ဝန်ကြီးရာထူးလောက်နဲပြန်တွေ့တဲ့.. ဇတ်လမ်းပြာလေးနဲ့ဆိုရင်တော့..
အာအိုင်တီမှာ ယောကျားလျှာမလေးနဲ့ဇတ်လမ်းလည်း.. လုပ်ပါဦး..
ဦးမိုက်ရယ်.. ဖတ်လို့ကောင်းလိုက်တာ… ဦးမိုက်တို့ခေတ်တွေတုန်းက တက္ကသိုလ်ဆိုတာ တကယ့်ကို.. ပျော်ရွှင်ရင်ခုန်စရာတွေနဲ့ပေါ့.. ကိုယ့်တွေအလှည့်ကျ လယ်ကွင်းထဲရောက်သွားတော့.. ကျောင်းမတက်..ဘာဇာတ်လမ်းမှမရှိ ဘွဲ့ရခဲ့ရ… :cryy: အဲ့ဘွဲ့လက်မှတ်တောင် အခုထိသွားမထုတ်သေးဘူး..မှတ်ကရော
လေးဆယ်ကျော် ငါးဆယ် အတွင်းမှ ပြန်ဆုံ ရတယ် ဒန်တန်တန်းတန် ပေါ့နော်
အခုလို အဖြူရောင် စင်ကြယ်မှုလေးနဲ့ပြန်ရေးပြတော့လည်း လွမ်းမောစရာလေး ရယ်
လေးမိုက်ရေ.. ပျော်လည်းပျော်ရတယ်။ စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကြည်လည်းကြည်နူးရတယ်။ အရမ်းမိုက်တယ်။
ပြီးတော့ လေးမိုက်ရဲ့တကယ့်ကိုယ်တွေ့ဇာတ်လမ်းလားဆိုတာလည်း သိချင်တယ်။
ရင်ထဲမချိလိုက်တာ အူးမိုက်ရယ်။ ဦးမိုက်ငယ်ချစ်ဦးဇာတ်လမ်းကတော့ ညိမ့်ညိမ့်လေးနဲ့ထိတယ်။ ဒါပေသိ သများဒို့သုံးနှစ်လုံးအရူးအမူးတက်ချင်ခဲ့တဲ့ သီရေတာမှာဦးမိုက်တက်ခဲ့ရတာတော့နာလိုဘု နာလိုဘု
အဖြူရောင်သံစဉ်ရဲ့ရိုက်ခက်မှုကပြင်းထန်တယ်လေးလေးမိုက်။လွမ်းရမယ့်အဖြစ်မျိုးရှောင်ပါတယ်။ ;) ငိုချင်တယ်ဖတ်ပြီး
ပထမဦးဆုံး ပြောချင်တဲ့ စကား တစ်ခုကတော့ ၊
ဇာတ်လမ်း ဇာတ်အိမ် ရော ၊ အရေး အဖွဲ့ ပါ ၊ ” ရှယ် ” ပါဘဲဗျာ ။
Congratulations ပါ ဦး ကြီးမိုက် ။
” ကျုပ်တို့ နှစ်ယောက်ကတော့ အဖေ့အကျ စစ်အင်းကျီကိုယ်စီနဲ့ စစ်လွယ်အိပ်ကိုယ်စီနဲ့ပေါ့……
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်လက်စွဲတော် ဂျမ်းဂဲဟက်ခေါ်တဲ့ စစ်ဦးထုတ်ကို ငိုက်ငိုက်ဆောင်းထားသေးတယ် ”
ဟုတ်ပါ့ ဦး ကြီးမိုက် ရေ ။
အဲဒီ ခေတ် အခါ တုန်းက ၊ လူတန်းစား ကွဲပြားမှု လဲ သိပ် မရှိသေး ၊
စစ်တပ်ကိုလည်း ပြည်သူက မ မုန်းသေးတဲ့ အချိန် ကပေါ့ ။
သူသူ ကိုယ်ကိုယ် ၊ စစ်အင်းကျီ စစ်လွယ်အိပ် စစ်ဦးထုတ် လေးတွေ ဝတ်ပြီး ၊
ကျောင်းတက် အလုပ်လုပ် ကြတဲ့ အချိန်လေးပေါ့ ၊ သတိရမိပါရဲ့ ။
” ကျောင်းမှာ သူငယ်ချင်းလေးငါးခြောက်ယောက်လောက် ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါင်းမိလာတယ်…
အောက်ကျမခံချင်တာနဲ့ တစ်နေ့စာတစ်နေ့ လုပ်ဖြစ်လာတယ်… ”
” အဲဒီသူငယ်ချင်းတွေကို ဒီနေ့အထိ ကျေးဇူးတင်နေမိတယ်…
သူတို့နဲ့သာမတွဲမိရင် ယောင်ချာချာကျုပ်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ် ”
အရှင် အာနန္ဒာ က ဘုရားရှင် ကို လျှောက်တယ် ။
အရှင်ဘုရား ၊ ကလျာဏ မိတ္တ ( နှင့် တွဲမိဖို့ ) ဟာ ၊
ဘဝ မှာ တဝက်လောက် အရေးပါတယ် ထင်ပါတယ် ဘုရား ပေါ့ ။
ဘုရားရှင် က အရှင် အာနန္ဒာ ကို ပြန်ပြောတယ် ။
ချစ်သား အာနန္ဒာ ၊ ကလျာဏ မိတ္တ ( နှင့် တွဲမိဖို့ ) ဟာ ၊
ဘဝ မှာ အလုံးစုံကို ( 100% ) အရေးပါပါတယ် ၊ ဘဝ မှာ အရေးကြီးဆုံး ပါ တဲ့ ။
ဦး ကြီးမိုက် ရေ ။
ကျနော်တို့ ဦး ကြီးမိုက်တို့ အရွယ်တွေ ရဲ့ ၊
အနည်းငယ်သာ ကျန်တော့တဲ ၊ ဘဝ ရဲ့ လက်ကျန် အချိန်ပိုင်းလေး အတွက်လည်း ၊
နောက်တစ်ကြိမ် ကလျာဏ မိတ္တ ကို ၊ တကူးတက ရှာပြီးကို ပေါင်းဖို့ လိုနေပြီနော် ။
ကောင်းမှုတွေကို တိုက်တွန်းပေးမယ့် ကလျာဏ မိတ္တ ဆိုတာကလည်း ၊
ကောင်းမှုတွေ လုပ်တဲ့နေရာတွေမှာဘဲ ရှိတတ်တာပါနော် ။
( ဥပမာ ။ ။ မပဒုမ္မာ တက်နေတဲ့ အဘိဓမ္မာ သင်တန်း စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ )
ရွယ်တူ အချင်းချင်း ၊ ဆရာ လုပ်တယ် မထင်ပါနှင့်ဗျာ ။
ပညာရှိ သတိဖြစ်ခဲ ဆိုသလို မေ့လျော့နေမှာ စိုးလို့ပါ ။
( ကောင်းမှုတွေကို တိုက်တွန်းပေးမှလဲ ကလျာဏ မိတ္တ ခေါ်ပေသကိုး ဗျ )
ဟဲ ဟဲ ။
အတည်အခန့် တွေ ၊ သူတော်ကောင်း ယောင်ဆောင်ကာ ပြောပြီးတဲ့ သကာလ ။
( ရွာသူား အငယ်တွေကတော့ ဦး ကြီးမိုက် ကို လူကြီးဆိုပြီး မပြောခဲ့ပေမယ့် ၊
ကျုပ် တို့က ရွယ်တူလောက်တွေ ဆိုတော့ ၊ ဟဲ ဟဲ )
” ပြီးတော့ မေ ရဲ့ စီစဉ်မှုနဲ့ ညဖက်ချိန်ပြီးခိုးတွေ့ကြတာပေါ့… အဲဒီမှာတင် ”
” ငါလည်း ဘာလို့ မင်းကို အဆက်အသွယ် ဖြတ်ခဲ့တာလည်း မေးတော့…
အခုမှတော့ ပြန်မပြောချင်တော့ပါဘူး ကိုစိုးကြီးရယ် တဲ့ ”
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ၊ အဲဒီမှာ ၊ အဲဒီမှာ ပေါ့ ။
တစ်ခုခု မှားသွားတာ လား ။
ဒါမှ မဟုတ် ၊ တစ်ခုခု လိုသွားတာ လား ။
ဟဲ ဟဲ ဟဲ ။
” လာမယ်…လာမယ်..ဇတ်လမ်းတွေအများကြီးကျန်သေးတယ် သဂျီးရေ ”
ဟဲ ဟဲ ။ ဒို့ ဦး ကြီးမိုက် ကြီးက တယ်မခေပါလားနော် ။
ဇတ်လမ်းကိုအသေအချာဖတ်ပြီး ကွနမန့်ရှည်ကြီနဲ့သုံးသပ်ပြသွားတဲ့ကိုဖေါ ကိုကျေးဇူးအကြီးကြီးပါနော
ရင်ထဲမကောင်းလိုက်တာ.. ငယ်သံယောဇဉ်ကတော့ ဘယ်တော့မှ မပြတ်တတ်ဘူးထင်တယ်နော်..
ဒါပေမယ့် အခုတော့ ရင်ထဲက မီးတစ်ယောက်သာ တစ်ဘဝပေါ့နော်.. ဟီး..
ဆြာမိုက်တော့ မဒမ် ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲအောင် ဇာတ်လမ်းဟောင်းတွေဖော်ပြန်ဘီ…
ကြုံလို့ကြွားရရင် မျက်နှာပြောင်လွန်းလို့ ကျောင်းတော်မှာဇာတ်လမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး…
နောက်ပြီး အိမ်ကကန်ချခံထားရတဲ့အချိန်မို့ ဝမ်းရေးက လွမ်းရေးထက်ခက်တယ်လေ…
ဒါပေသည့် အာစီတူးကို အတော်လွမ်းသွားတယ်…
လူငယ်ကန်တင်းန်က ထမင်းပေါင်းတောင် စားချင်လာပြီ… ဂွိ
တခါတလေ ဒီလိုလွမ်းစရာလေးတွေဟာအသက်ကိုပိုရှည်စေတယ်ဗျ ။
လွမ်းစရာရှိတယ်ဆိုကတည်းက လွမ်းလောက်အောင်ရှိခဲ့လို့ပေါ့ ။
လွမ်းလောက်ပြီးဆိုတာကြည့်ရုံနဲ့ ဒီလူ မခေဘူးပဲ
မလွမ်းတတ်တဲ့ ကျုပ်တောင်မှ သမဝါယမဆိုင်မှာ ရွှေဝါဆပ်ပြာတန်းစီတာသတိယမိသေးတော့တယ်ဗျ
ဇတ်လမ်းလေးရော အရေးရော လွှတ်ကောင်းဗျာ
တကယ့် အဖြူရောင်လေးပါ ပဲ ဆိုတာ ကြုံဘူးသူမှ ယုံနိုင်ကြတာပါ
အပြင်လူ မကြားနိုင်တဲ့ ရင်ခုန်သံလေး ကြားသွားပါတယ်
လွမ်းပင် လွမ်းဆိုင် လွမ်းလို့ မဆုံးနိုင်အောင်
လွမ်းငွေ့တွေလည်း တစ်ဝေဝေပါကွယ် … ေိခိ
သို့ို့မို့ေုကြာင့်လည်း အချိန်သည် အကောင်းဆုံးသမားတော် လို့ ဆိုပေသကိုးးးးးးး
ဇာတ်လမ်းကတော့ တခေတ်တခါက အရိုးရှင်းဆုံးနဲ့ သိမ်မွေ့ကြည်နူးစရာ အခြေအနေပေါ့ ….
ဦးမိုက်ရေ တက္ကသိုလ်ဆိုတဲ့ ပန်းရောင်စုံပွင့်တဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးကို အလည်မရောက်ခဲ့ရသူမို့ ကနေ့အထိ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတရားနဲ့ ထိတွေ့ခံစားဖို့ အခွင့်မသာခဲ့ဖူးဗျို့ state ကျောင်းတုန်းကတော့ သွားသွားပီး ခိုးကြည့်ဖူးတဲ့ ကျော့်ထက် ၁နှစ်ကြီးတဲ့ အမတယောက်တော့ ရှိခဲ့လေရဲ့ ဒါကလည်း အဖြစ်မရှိခဲ့ပါဘူး ဆို့တော့ဗျာ ကျော့်အနေနဲ့ကတော့ ငယ်ချစ်တွေ ကြီးချစ်တွေ မရှိခဲ့တော့ အူးမိုက်ဇာတ်လမ်း၄ ဖတ်ပီး ငါလည်း ဒလိုလွမ်းစရာလေးရှိရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိလေရဲ့ ခုတော့ တချိန်ချိန်မှာ တစုံတယောက်အပေါ် ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာလေး နှစ်ကာစွာ သက်ဆင်းပေးဆပ်ခြင်လေရဲ့
နောက်က ခေတ်အခြေအနေကိုပါ မှတ် ပြီးတော့
ထပ် လွမ်း သွားတယ်ဗျာ……………..
လွမ်း … ရင်ထဲ လှိုက်လို့ သိပ်ကိုလွမ်း ..
လွမ်း … ရင်ထဲ ရှိတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်း …
ဟိုတုန်းက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားဘဝ ကိုတော့ အမှန်ပင်လွမ်းမိပါ၏။